मन्त्रीज्यू ! लौ न मेडिकल कलेजमा भनसुन गरिदिनुपर्र्यो ! – YesKathmandu.com
सोमबार २०, मङि्सर २०७३
मैले स्वास्थ्यमन्त्री पदभार गरेकोे तीन महिना भयो । स्वास्थ्य क्षेत्र शैंयामा छटपाउँदै गर्दा मैले पदभार सम्हाले । स्वास्थ्य विमा लामो समयदेखि बेहाल हुँदै आएको छ भने यसप्रति कुनै ऐनकानून बनेको छैंन । अहिले हामीले यसलाई संसदमा पुर्याउदै छौं ।
अहिले स्वास्थ्यमन्त्रालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एक अर्ब रुपैंयाँ छुट्याइएको छ । राजधानीमा नीजि स्वास्थ्य क्षेत्रले बिरामीहरुलाई दश प्रतिशत छुट दिनुपर्ने नियम हुँदोरहेछ तर त्यो लागू नै भएको रहेनछ । अहिले राजधानीमै ६० प्रतिशत ‘क्लिनक’ हस्पिटलहरु दर्ता नै नभई सञ्चालन भएका रहेछन । माघ मसान्तभित्र यस्ता दर्ता नै नभई सञ्चालन भएका क्लिनिक हस्पिटलहरुलाई कार्बाही हुनेछ । यदि क्लिनिक दर्ता गरेर गरिब तथा निमुखाहरुलाई अनिवार्य रुपमा दश प्रतिशत छुट दिनुपर्ने नियम हामीले बनाउदैछौं । यो नियम जस्ले दूरुपयोग गर्छ उसको नाम र फोटोसहित पत्रिकामा छाप्छौं ।
क्यान्सर जस्ता ठूलो रोगको उपचारका लागि सरकारले एक लाख दिँदा बिरामी गरिबहरुको दश लाख खर्च हुन्छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि हामीले औषधि उत्पादक र बिरामीसँग के हुँदा औषधि सस्तोमा किन्न पाइन्छ भनेर परामर्श थालिरहेका छौं । हो, अहिले हामी यहि विषयमा हिँडिरहेका छौं,कसरी औषधि सस्तोमा किन्न पाइन्छ ?
मेडिकल कलेजका लागि सरकारले देशको दुई ठाउँमा खोल्ने निर्णय गरेपनि यस विषयप्रति विवाद कायमै रहेको छ । मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन दैनिक सयौंं विद्यार्थी मेरो मन्त्रालय धाउने गर्छन्, लौ न यसो कलेजमा भनसुन गरिदिनुपर्यो । साझा सवाल कार्यक्रमबाट
अछामको चौरपाटी गाउँपालिकामा एक मतले एमालेको विजय
भूकम्पपछि ११ हिमाताल फुट्ने खतरा
काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर फेरी पराकम्पन
तीन संस्थाद्वारा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध
काभ्रेको देउरालीमा बस दुर्घटना, २४ जनाको मृत्यु